၅၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇ နေ့ထုတ် စံတော်ချိန်နေ့စဉ်၊ အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၁၆၄၅
By DPNS INFORMATION, on November 5th, 2017
နိုင်ငံရေးပါတီများ လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ရေးတွင် အကန့်အသတ်များရှိနေဟု ဝေဖန် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ အားကောင်းရန်လိုပြီး လက်ရှိတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ရေးအတွက် အကန့်အသတ်များရှိနေကြောင်း လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က ဝေဖန်လိုက်သည်။ ဝေဖန်ပြောကြား နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ အောခစ်ဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်သည့် “မြန်မာ့နိုင်ငံရေး – ပါတီစုံစနစ်လား၊ တစ်ပါတီစနစ်လား” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည့် DVB Debate အစီအစဉ်တွင် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က ဝေဖန်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဆန့်ကျင်နေ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ကြေညာချက်များ ဥပဒေနှင့်မညီပါက အရေးယူသွား မည်ဟု ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ပြောဆိုထားရာ အဆိုပါအကြောင်းအရာသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု Debate ဝေဖန်မှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လို “နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ယနေ့အခြေအနေအောက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မှာ အဲဒီအခြေအနေ မရှိသေးဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ဖို့၊ သူ့ဘာသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ အခုက အကန့်အသတ်တွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်။ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စကို သေသေချာချာ အလေးအနက်ထားဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်”ဟု ဦးအောင်မိုးဇော်က ပြောဆိုသည်။ သဘောပေါက်ရန်လို တိုင်းပြည်က စင်စစ် ဒီမိုကရေစီအခြေအနေကို မရောက်ရှိသေးသည်ကို သဘောပေါက်ရန်လိုပြီး ဒီမိုကရေစီ အရေး လုပ်ဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် ဒီမိုကရေစီကို အဟန့်အတားလုပ်လိုသည့် အင်အားစု များကြားတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးနေရကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။ ဥပဒေအများအပြားရှိနေ အာဏာရNLD အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖော်ထုတ်ခွင့် များအတွက် ပြင်သင့်ပြင်ထိုက်သည့်ဥပဒေ အများအပြားရှိနေသည်ကို အာရုံစိုက်ရန် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မုန်းဆာခေါင်းက တိုက်တွန်းသည်။ လုံးဝမလုပ်သင့် ‘လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့် အဲဒါမျိုးက တကယ့်ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Statement ထုတ်တယ်ဆိုတာ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်၊ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်တယ်ဆိုကတည်းက လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်၊ ဟောပြောခွင့်၊ စည်းဝေးခွင့်မရှိဘဲ ဒီနိုင်ငံရေးပါတီက ဘယ်လိုမှ မရပ်တည်နိုင်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီကို ဖွင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ကို ပြန်လည်ရိုက်ဖျက်နေသလိုပဲ။ အဲဒါမျိုး လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။ သဘောတူ နိုင်ငံရေးပါတီများ လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခွင့် အကန့်အသတ်၊ အတားအဆီးများရှိခြင်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်၏ သန်လျင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးလွင်ကိုလတ်က သဘောတူသည်။ ပါတီတွေရှင်သန်ရေး ‘အတားအဆီး၊ အကန့်အသတ်ဆိုတာ ဥပဒေဆိုင်ရာ အတားအဆီး၊ အကန့်အသတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ တခြားသော အခြေအနေတွေမှာရှိတဲ့ အတားအဆီးအကန့်အသတ်တွေ အများကြီး ရှိနိုင်တယ်။ အချိန် တစ်ခုမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီမိုကရေစီကို တန်ဖိုးထား လို့။ ပါတီတွေရှင်သန်ရေးဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အသက်ပဲ။ အဲဒါကြောင့် ပါတီတွေ တွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲကို တစ်နေ့ သေချာပေါက် လွှတ်တော်ထဲ ပြောကိုပြောရမယ့်ကိစ္စပဲ”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေး DVB Debate အစီအစဉ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးလွင်ကိုလတ်၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မုန်းဆာခေါင်း၊ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်တို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်သည်။ (၅၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇ နေ့ထုတ် စံတော်ချိန်နေ့စဉ်၊ အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၁၆၄၅)
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော် နှင့် First Weekly Journal အင်တာဗျူး
By DPNS INFORMATION, on November 4th, 2017
ဒီမိုကရေစီအခြေခိုင်မာဖို့ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အောင်မြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဟု ဦးအောင်မိုးဇော် ပြောကြား ယခင်အစိုးရသက်တမ်းအတွင်းက အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို NLD လူထု အစိုးရလက်ထက်တွင် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် NCA စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်သက်တမ်းမှာ ၂ နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရသည့် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံနှင့် မျက်မှောက်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအပေါ် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေး ကွဲပြားခြားနားချက်များအပေါ် သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အဲ့ဒီ အသုံးအနှုန်းတွေ ဘယ်လိုကနေဘယ်လို ပေါက်ဖွါးလာသလဲ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံရေးပါပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် သာယာငြိမ်းချမ်းဖို့၊ တရားမျှတဖို့၊ တန်း တူဖို့၊ ညီညွတ်ဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ထောင့်နေရာက တတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ဆိုတာကပဲ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်အခြေအနေတွေအောက်မှာဆိုရင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ဖြစ်၊ သမဂ္ဂပုံသဏ္ဌာန်တွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီလို စုဖွဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ဖြစ် ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်အောင် ပိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင် ရွက်ကြဖို့ချည်းပါပဲ။ အားလုံးက တိုင်းပြည်အတွက်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆောင်ရွက်ကြတာ ဆောင်ရွက်ကြရမှာ လို့ပဲ မြင်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မေးခွန်းမှာပါတဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုတာ သီးခြားစီဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် မယူဆဘူး၊ မခံယူပါဘူး။ ဒီ့အတွက် ကွဲပြားခြားနားချက် ဆိုတာလည်း ကျနော် ဖြေဆို သုံးသပ်ပြဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ နည်းနည်း ဖြည့်ပြောချင်တာက ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမဆို ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆကို အခြေခံပြီး၊ အမျိုးသားပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ကြရ တာချည်းပါပဲ။ ကနေ့ခေတ်ဆိုရင် တိုင်းနိုင်ငံဆိုတဲ့ ဘောင်တွေတောင်မှ ကျော်လွန်ပြီး၊ ဒေသတွင်းကိစ္စ နိုင်ငံတကာ ကိစ္စတွေအထိ ကိုယ်နဲ့ အခြေခံတူတဲ့ နိုင်ငံတကာက နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအတွက်၊ ကိုယ့်ဒေသအတွက် အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေကြတာ အထင်အရှားပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ပါဝင်လာမှုအပေါ် ပြောကြားပေးပါဦး။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ပါဝင်လာရတာ သဘာဝကျပါတယ်။ တရုတ်ဖြစ်စေ၊ ထိုင်းဖြစ် စေပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံက တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့နိုင်ငံတွေနဲ့ ထိစပ်နေကြလို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ပါဝင်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မပါဝင်ချင်ဖြစ်စေ တနည်းနည်းနဲ့တော့ ပါကို ပါရမယ့်အနေအထား ဖြစ်နေတယ်။ နောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအနေနဲ့က သူ့ရဲ့ စီးပွါးရေး နိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ ဆိုရင် သူ့နယ်စပ်ဒေသတွေ၊ အိမ်နီနးချင်းနိုင်ငံတွေ နိုင်ငံရေးအရ တည်ငြိမ်ဖို့၊ အေးချမ်းဖို့ ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်။ နောက် တရုတ်က ကျနော်တို့ အိမ်နီးချင်းတင်ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုပါဖြစ်တော့ တခြား သူနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖက်တွေရဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံအပေါ် သဘောထားတွေကိုလည်း ထိန်းယူနိုင်ဖို့ သူ့ဘက်က စဉ်းစားမှာ မလွဲပါပဲ။ အဲ့သည်တော့ တရုတ်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်နိုင်ခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုကောင်း တောင်း ဆိုမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ လုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ကူညီလိုတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတိုင်းကို ဝမ်း ပမ်းတသာ ကြိုဆိုကြရမယ်လို့ ကျနော် ယူဆတယ်။ ဒါ ဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေခံသဘောထားလို့ မြင်တယ်။ မိတ်ဆွေနိုင်ငံ တွေရဲ့ ကူညီမှုတွေကို ကျနော်တို့အတွက် ဘယ်လို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချမလဲ …. ဆိုတာကသာ ကျနော်တို့ ဘာသာ ဖြေကြရမယ့် မေးခွန်း ဖြစ်တယ်။ နောက် တရုတ်နိုင်ငံကို သူနဲ့ နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက အလေးထားကြရတယ်။ ကျနော်တို့ (တတိုင်းပြည်လုံး)အဖို့ကလည်း တစုံတရာ အလေးထားကြရတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပါပဲ။ အကယ်၍သာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ သဘောထားကလည်း မှန်ကန်မယ်။ ကျနော်တို့ အင်အားစုတွေရဲ့ သဘောထားကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်လိုတဲ့ သဘောထား၊ စိတ်ဆန္ဒ အမှန်တကယ် ရှိကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက အများကြီး အကျိုးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက်လောက်တင် မဟုတ်၊ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါ တရုတ် နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေး အထူးကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောလိုတာကတော့ တခါတခါ အင်အားကြီးနိုင်င့တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ သူတို့ဘက်က ဗိုလ်ကျသလို ဖြစ်တတ်တာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ …… (က) ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ တရုတ်ရဲ့ ပါဝင်မှုဟာ ကျနော်တို့တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်ရေး၊ အေးချမ်းရေးဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အဓိကနေရာက ရှိရမယ်။ ဒါမှ အကောင်းဘက်က ပါဝင်မှု လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ( ခ) ကျနော်တို့ နိုင်ငံ့အကျိုး သူတို့နိုင်ငံ့အကျိုး မျှတဖို့ လိုတယ်။ ( ဂ) ကျနော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒတွေကို အလေးထားဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ NLD လူထုအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဆိုပြီး၊ Instituation ၂ ခု သီးခြား ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့ရဲ့ ဝေဖန်ပြောကြားချက်အပေါ် သဘောထားအမြင် သုံးသပ်ချက်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ မလွှဲမရှောင်သာ သဘာဝကျကျ အစိုးရ (၂)ခုလို ကျနော်တို့နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်တည်နေတာ လက်တွေ့ပါပဲ။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့တင် မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစု အားလုံးလိုလိုက ဒီအတိုင်းပဲ မြင်ပါတယ်။ ဟိုတလောက ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကတောင် Civilian Authority နဲ့ Military Authority ဆိုပြီး ခွဲခြားပြီး သုံးသွားတဲ့သတင်း ကျနော်ကြည့်လိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးက နေ လုံးဝ ဆုတ်ခွါပါမှ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေ မဖြစ်နိုင်သေးရင်တောင် တပ်မတော်က အစိုးရကို ပြည့်ပြည့်၀၀ နာခံဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် အလေးထားပြီး ဟန်ချက်ညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ တပ်မတော်မှာ အရာကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သီးခြားသဘောထားတွေ ရှိနေရင်တောင်မှ လူထု ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရနဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးမှသာ လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ဆောင် သင့်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ NLD အစိုးရ့လက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအချို့ ရှိခဲ့ပေမယ့် စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စတဲ့ ကဏ္ဍများမှာ ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အပေါ် သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြေကြား ပေးစေလိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအချို့ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာက အငြင်းပွါးစရာရှိတယ်လို့ ပြောချင်ပါ တယ်။ တကယ်က ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်တွေဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ – နဂိုရ်အတိုင်းပဲ။ တိုက်ပွဲတွေတောင် ပို များလာသေးတယ်။ ရခိုင်ပြဿနာဆိုရင် ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကျဆင်းသွားရတာ ငြင်းလို့ မရတဲ့ အချက်ပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး ကိစ္စကရော – လွှတ်တော်ထဲမှာ အသံတောင် မထွက်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကရော ဘယ်လိုလဲ – ဝန်ကြီးဟောင်းတယောက်ရဲ့သား၊ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်တဦးကို လက်နက်တွေနဲ့ နေပြည်တော်လေဆိပ်လိုမျိုးမှာ မိခဲ့တာ လက်တွေ့ပဲ။ အစိုးရက ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ လုံခြုံရေးတွေဘက်ကို အခုအချိန်အထိ မည်မည်ရရ ဦးမလှည့်နိုင် သေးဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ တိုးတက်မလာလို့၊ အကြပ်အတည်းတွေ့နေလို့ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး အကြပ်အတည်းတွေ တွေ့ နေတာလို့ ကျနော် တင်ပြချင်တယ်။ ကျနော် ပြောသင့်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ စကားအနည်းငယ်ကို ထည့်သွင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ၁။ တိုင်းပြည်ကို တစ်ယောက်တည်း အုပ်ချုပ်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ၂။ အစုအဖွဲ့ လိုတယ်။ တစ်စုလုံး တစ်ဖွဲ့လုံး အရည်အချင်းပြည့်ပြီး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိဖို့ လိုတယ်။ ၃။ လက်တွဲဖေါ် မဟာမိတ်တွေ လိုတယ်။ ဒါတွေဟာ နိုင်ငံရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့၊ စီးပွါးရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံဟာ NLD ပါတီရဲ့ လက်ရှိ ၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ အစိုးရသက်တမ်း ကာလအတွင်းမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ပါ့ မလား သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ အခုဘဲ ၂၀၁၇ က ကုန်ပါတော့မယ်၊ NCA ကို လက်မှတ်ထိုးသူက မူလ ၈ ဖွဲ့အတိုင်းဘဲ ရှိသေးတယ်။ NCA ကို ပြန်လည် မသုံးသပ်နိုင်ရင်၊ သုံးသပ်ခဲ့သည့်တိုင် အသေအချာ သဘောတူညီမှု မရရင် UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေက NCA ကို လက်မှတ်ထိုးလာဖို့ မသေချာနိုင်ဘူး။ နောက် ဝ တို့၊ ကချင်တို့ စတဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်း ကျန်နေ သေးတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အာရုံမစိုက်လို့ မရနိုင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာက ထပ်ပေါ်လာတော့ NCA နဲ့ ငြိမ်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ် အများကြီး ရိုက်ခတ်မှု ရှိနိုင်တယ်။ ဟိုတလောက NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ့ထဲက အဓိကအကျဆုံး အဖွဲ့အစည်းကြီး ဖြစ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) က သဘောထားကြေညာချက် ၁ စောင် ထုတ်ပြန်တာ တွေ့လိုက်ရ တယ်။ ကြေညာချက်မှာက “ လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဘောင် အတွင်းက နေ ဖြေရှင်းဖို့ ခက်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့၊ တပ်မတော်အနေနဲ့ ကိုင်စွဲထားတဲ့ မူဝါဒတွေကို ဖြေလျှော့ပေးဖို့ လိုတယ် ” လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ တပ်မတော်အနေနဲ့ကလည်း သူ့မူဝါဒတွေကို ဖြေလျှော့ဖို့ ဆိုတာ ခက်နိုင်တယ်။ ဖြေ လျှော့တော့မယ့်လက္ခဏာလည်း မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ချုပ်ကြည့်ရင်တော့ ဒီ ၃ နှစ် – ၄ နှစ် လောက်အတွင်း ပြေလည်ဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်အလက် ကျနော် မတွေ့မိ သေးပါဘူး။ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ အနာဂတ်အလားအလာများအပေါ် သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဖြေကြား ပေးစေလို ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ အဖြေ (၃၊ ၄၊ ၅) တို့ဟာ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တခုလုံးကိစ္စ ကို ချုပ်ပြီး ကျနော် တင်ပြပါ့မယ်။ ၁။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီအခြေအနေတွေ ခိုင်မာဖို့ ရုန်းကန်နေရဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီအခြေ အနေတွေ ခိုင်မာဖို့ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အောင်မြင်ဖို့ လိုတယ်။ ထို့အတူပဲ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး အောင်မြင်ဖို့ လိုတယ်။ ၂။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ် ၂ ရပ် အောင်မြင်ဖို့ ဆိုရင် ဒီ ၂ ရပ်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည်ဖေါ်လိုတဲ့ (Political Will) ဟာ အစိုးရမှာ၊ တပ်မတော်မှာ၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေမှာ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေကြဖို့ လိုတယ်။ ၃။ ပြည်သူတွေရဲ့ စီးပွါးရေးဘဝကလည်း အရေးကြီးတယ်။ ကနေ့အခြေအနေမှာ အခြေခံလူထုရဲ့ စားဝတ်နေ ရေး ပြဿနာကို လျစ်လျူရှုခံထားရသလို ဖြစ်နေတယ်။ ၄။ အရေးထဲအရာပေါ်ဆိုသလို တကမ္ဘာလုံးနဲ့ မသင့်မတင့်ဖြစ်စရာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပြဿနာတခုက ထပ်တိုး လာတယ်။ ၅။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလည်း လူသိရှင်ကြား ယိုယွင်းနေတယ်။ ၆။ ဒီအခြေအနေတွေကို မကျော်နိုင်ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အရေးဟာ ရင်လေးစရာ ဖြစ်တယ်။ ၇။ သို့သော် စိတ်ဓာတ်ကျစရာ၊ အားလျော့စရာချည်းလို့ ကျနော်တော့ မထင်ဘူး။ ကျနော်တို့မှာ အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ ပြောနိုင် ဆိုနိုင် လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ဝန်းကျင်တခု ရှိနေတယ်။ ဒါကို သေချာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကျနော်တို့အင်အားစုတွေအားလုံး စုနိုင်မယ် ညီညွတ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်နိုင်ကြမယ်လို့ ယုံတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်ကို ဖြစ်လာမှာလို့ ယုံကြည်ပါတယ် ××××× ××××× ×××××
ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု ၆၉ နှစ်ပြည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ သို့တက်ရောက်
By DPNS INFORMATION, on November 2nd, 2017
၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၇ နေ့လယ် ၁ နာရီမှ ၀၃း၃၀ နာရီထိ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းရှိ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းဂူဗိမာန်တွင် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်နှင့် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဂူဗိမာန်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က စီစဉ်သည့် စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်နှင့် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု ၆၉ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် “မဟာမှိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ယနေ့ဗမာပြည်” နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆရာဦးအံ့မောင် (နာယက၊ မှိုင်း/ငြိမ်း ကွန်ရက်)နှင့် ဆရာကြည်နိုင်တို့က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် “ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဦးချစ်ဆောင်ဦး(မှိုင်း/ငြိမ်း ကွန်ရက်)၊ “ဆရာကြီး၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး အကျပ်အတည်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဦးငွေလင်း(မှိုင်းရာပြည့်)၊ “ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကိုကျော်ကိုကို(SDUF)တို့က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးကြပြီး ပရိတ်ဿတ်များက မေးခွန်းများ ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။
ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း (၂၉)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ “နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာ့အရေး”တွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်၏ ဆွေးနွေးချက်။
By DPNS INFORMATION, on October 30th, 2017
ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း (၂၉)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ “နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာ့အရေး”တွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်၏ ဆွေးနွေးချက်။ ၂၀၁၇ ခု၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း (၂၉)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ “နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာ့အရေး”တွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် “ ကုလသမဂ္ဂ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် မြန်မာအစိုးရ ဆက်ဆံရေး ” ဆွေးနွေးချက်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီတည်ထောင်ခြင်း ၂၉ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်
By DPNS INFORMATION, on October 26th, 2017
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီတည်ထောင်ခြင်း ၂၉ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကိုးမိုင် အောင်မြေဘုံသာရှမ်းကျောင်း ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် SNLD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် UNA အဖွဲ့ဝင်ပါတီများ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစရှိသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့်ဧည့်သည်တော်များ အခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး သဝဏ်လွှာများလည်း ပေးပို့ခဲ့ကြပါသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (၂၉)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (၂၉)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ (၂၆၊ ၁၀၊ ၂၀၁၇) .
ဗိုလ်မှူးကြီးစောလွင်ကျဆုံးခြင်း ၆ လပြည့် အမှတ်တရအခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်
By DPNS INFORMATION, on October 25th, 2017
ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်မှူးကြီးစောလွင်(ခ)ဦးဌေးအောင် ကျဆုံးခြင်း ၆ လပြည့် အမှတ်တရအခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် နေ့လည်၁း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီအထိ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဉာဏ်လင်းသစ်သုတေသနစာကြည့်တိုက်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် သားဖြစ်သူ ကိုထွန်းသူအောင် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော် ၇၄-၇၅-၇၆ နိုင်ငံရေးအင်အားစုမှ ဦးခင်ဝင်း ကယန်းပြည်သစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးစိုးနိုင်သန်းတို့က ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရစကား ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးစောလွင်ဈာပနအား ရိုက်ကူးထားသည့် “အမှောင်ထုကိုအံတုရဲတဲ့ အလင်းတစ်ပွင့်” မှတ်တမ်းခွေ ရိုက်ကူးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သားကြီးမောင်ဇေယျနှင့် ကိုဉာဏ်ကြီးတို့က အမှတ်တရ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ဗိုလ်မှူးကြီးစောလွင်၏မိသားစုဝင်များ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ညီညွတ်ရေးတပ်ဦး လူ့ဘောင်သစ်လူငယ် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၇၄-၇၅-၇၆ နိုင်ငံရေးအင်အားစု ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆရာဗန်းမော်တင်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၃၉ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်
By DPNS INFORMATION, on October 23rd, 2017
ပြည်သူ့စာရေးဆရာ ပြည်သူ့သတင်းစာဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၃၉ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်းမှနေ့လည်ပိုင်းအထိ တောင်ဥက္ကလာပစိတ်တိုင်းကျစားသောက်ဆိုင်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာဦးအံ့မောင် သိက္ခာတော်ရဆရာဦးကျော်ညွန့် ကိုကိုးကျွန်းပြန်ဦးလှချို ဆရာဦးအောင်မော် ဆရာမဒေါ်ခင်နှင်းဦး ဆရာကိုလေးမြတ် သားဖြစ်သူ ဦးဗဟိန်းအောင်တို့က ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်၏ စာပေနှင့်နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတို့ကို အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်း ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်နှင့် ကိုကိုးကျွန်းပြန်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတို့ကို ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်မိသားစုက အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံရေးနှင့် စာပေအနုပညာနယ်ပယ်မှပုဂ္ဂိုလ်များ ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ကို ချစ်ခင်လေးစားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
VOA နှင့် DPNS ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးဇော် အင်တာဗျူး
By DPNS INFORMATION, on October 20th, 2017
ရခိုင်အရေး နိုင်ငံတကာဖိအား မြန်မာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ထိခိုက်နိုင် ၁၉၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၇ ( VOA နှင့် DPNS ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးဇော် အင်တာဗျူး ) ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စနစ်တကျ ကျူးလွန်နေတယ်လို့ ဆိုပြီး မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်အရေးယူဖို့ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ် ၄၀ ကျော်က တိုက်တွန်းလိုက်သလို ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ် သက်လို့ မြန်မာအစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိအားပေး ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက လက်ရှိ သွားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မခင်ဖြူထွေးက စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ ဒုက္ခသည် သိန်းနဲ့ချီ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲ ထွက်ပြေးခဲ့ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက မြန်မာအစိုးရနဲ့ အထူးသဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန် ပြောဆိုနေတာပါ။ မနေ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲ အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေက မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်သွားဖို့ အမေရိကန်အစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်တာလို ဒဏ်ခတ်မှုမျိုးတွေ ပြန်လည်ကျင့်သုံးဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကို အောက်လွှတ်တော်အမတ် ၄၀ ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုး တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကလည်း ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ငါးသိန်းကျော် ထွက်ပြေးနေရတဲ့ အခြေအနေကို ကမ္ဘာက ဒီအတိုင်း လက်ပိုက် ကြည့်မနေသင့်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးရတဲ့ အခြေအနေဟာ လူမျိုးတုံး သုတ်သင်ရှင်းလင်းရာရောက်တဲ့အထိ ဖြစ်လာနေ တယ်လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စွပ်စွဲပြောဆိုနေတာပါ။ ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ ရှေ့ သီတင်းပတ်ထဲ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်ဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆိုတာတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ တိုးမြင့်လာတာဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ပါးပါးနပ်နပ် ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ ဦးအောင်မိုးဇော် – “၁ တချက်ကတော့ ၀မ်းနည်းစရာအခြေအနေတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ဒေသ ပါ။ တကယ့်ကိုဖြစ်သွားတဲ့ အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အစိုးရအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုလိမ့် မယ်၊ လက်ခံဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ထင်တယ်။ ၂ အချက်က ဘယ်လိုအမှားအယွင်း တွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ။ နောက်တခုက ကောင်းမွန်တဲ့ Reason တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အစိုးရအနေနဲ့ အသိ မှတ်ပြုဖို့ လိုလိမ့်မယ် လက်ခံဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ထင်တယ်။ ၂ အချက်က ဘယ်လို အမှားအယွင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှားအယွင်းဆိုတာက ကိစ္စတိုင်းမှာ ရှိနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုအမှားအယွင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ သေသေချာချာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အထူးသဖြင့်တော့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ သေသေချာချာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပြီးတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ လိုတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါက ၂ အချက်။ ၃ အချက်ကတော့ အကယ်၍ အမှား အယွင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့လို့ရှိရင် အမှားအယွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲနဲ့ သေသေချာချာ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ တော့ အဲလိုထင်တယ်။ အဲဒါမှ နိုင်ငံတကာရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ကျနော်တို့ ပြန်ရလိမ့်မယ်။ အဲလိုအခြေအနေ မလုပ်ဘူးလို့ “ဘူး” ခံနေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရဖို့အတွက်က တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီဒေသ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတကာရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကျနော်တို့မှာ အများကြီးလိုတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေ ကျနော်တို့ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမယ့် အခြေအနေရှိနေတယ် လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။”
(SYCB)၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် World Youth Day for Democracy အထိမ်းအမှတ် ဆွေးနွေးပွဲ သို့တက်ရောက်
By DPNS INFORMATION, on October 18th, 2017
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလူငယ်များကွန်ဂရက်(SYCB)၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် World Youth Day for Democracy အထိမ်းအမှတ် ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ကိုသွင်လင်းအောင်က လူငယ်နှင့်ဒီမိုကရေစီ မိဆူးပွင့်က လူငယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး မဖြိုးဖြိုးအောင်က လူငယ်နှင့်ပညာရေးခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လူ့ဘောင်သစ်လူငယ် နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူလူငယ်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။